hadihadiana lalina dia taratasy tsy misy sosony any anaty bokim-panjakana akory. Tahaka izany no nanjo ireto olona maromaro izay efa nonina an-taonany naharitra tamin’ny kaominina ao Toamasina kanefa tampotampoka eo dia misy milaza ho tompony ilay tany. Naniraka vadin-tany ny olona iray, voalaza fa tompon’andraikitra teo anivon` ny kaominina, nandroaka azy ireo. Araka ny nambaran’ny mpîsolovava an’ireto fokonolona efa nanamaintimolaly ny tany dia tsy marim-pototra io taratasy fiofampivarotana io fa hosoka kanefa nahagaga, hoy izy ny nanomezan’ny Fitsarana alalana azy io handroaka ireo olona efa nonina teo am-polo taonany maro. Ny nahagaga aza dia ireo olona efa nanamaintimolaly ny tany indray no niditra am-ponja vonjimaika tamin’izao raharaha izao. Raha ny fanazavana hatrany dia ilay taratasy fifampîvarotana teo amin’ilay mitonona ho nahazo ny tany sy ny solotenan’ny kaominina nanasonia ilay fifampivarotana dia fotoana fohy ihany satria tsy an-taonany, tsy am-bolana fa telo andro monja.Tsy zava-baovao akory ny fisiana adin-tany tahaka izao any Toamasina sy ny fisiana olona miray tsikombakomba fa efa zary mahazo vahana mihitsy. Ny Minisitry ny Fitsarana teo aloha moa raha nanontanian’ny mpanao gazety momba ny toetran’ireo tomponandraikitry ny fitsarana sasantsasany any Atsinanana ity dia niaiky fa misy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ka na ireny antontan-taratasin’ady ireny afindra amin’ny toeran-kafa ny fitsarana azy na mpitsara hafa avy aty Antananarivo no asaina manao ny fitsarana. Ireo mpisolovava any an-toerana indray nefa dia nilaza fa toa manome fahasahiranana ny olona arovany ihany ny famindrana ny fitsarana any an-toeran-kafa.